Musiyano Pakati peFalcon Uye Hawk Kuzivisa - Dzidziso
pane mutero we icloud
apuro wachi nhevedzano 1 bhatiri dhureni
Chii chinonzi iphone ndege ndege
iphone 6 bhatani repamba harisi kushanda
Musiyano Pakati peFalcon Uye Hawk
Difference Between Falcon
Musiyano uripo pakati peFalcon neChapungu. Kuudza mutsauko uripo pakati pegandondo negora idambudziko rekuzivikanwa, rakajairika zvekuti vanhu vanowanzondikumbira rubatsiro.
Nhasi ini ndichakuudza maitiro ekuziva shiri iwe pachako.
Right kubva pabhati ini ndave kutetepa chiyero. Kumadokero kwePennsylvania unogona kuona kusvika mapfumbamwe hawk uye matatu emarudzi erudzi zvichienderana nenguva yegore uye pekugara. Kuti izvi zvikwanisike ndichagadzirisa mubvunzo unonyanya kuzivikanwa unotarisana nevanhu veguta: Shiri iyi igondo reganda here kana gora rakatsvuka?
Kutanga, zvibvunze mibvunzo inoverengeka yakakosha.
Ndiyo shiri inodya nyama here? Shiri dzinodya nyama dzinodya nyama saka dzakabayirira miromo (ona muromo wemuromo) nematoni (nzara huru). Kana shiri isina maficha aya haisi rukodzi kana gora uye unogona kumira ipapo.
Inguvai yegore? Maperegrini nemitsvuku-miswe inogara kumadokero kwePennsylvania gore rese saka nguva yegore haibvise chero shiri nekuda kwekutama. Nekudaro kuzivikanwa kuri kunetsa muna Chikumi uye kutanga kwaChikunguru apo vana vechidiki peregrines vari kubhururuka vachitenderera guta.
Shiri iripi? Munzvimbo ipi? Iri muguta riri pachivakwa here? (Inogona kunge iri peregrine kana muswe mutsvuku) Mumasabhabhu? (ingangoita mutsvuku-muswe hawk) Pabhiriji? (chero shiri) Padanda rakareruka pamusoro penzira huru? (pamwe muswe mutsvuku) Mumuti? (pamwe muswe mutsvuku) Wakamira patafura yako yepikiniki? (pamwe muswe mutsvuku) Kumira pasi? (pamwe muswe mutsvuku)… Asi muna Chikumi vana vechidiki peregrine vanogona kuwanikwa mune dzimwe nzvimbo dzvuku-muswe.
Iyo shiri iri munzvimbo yemunhu here? Iyo shiri yakagara padhuze nevanhu uye haina kana basa navo? Kana zvirizvo, ingangoita mutsvuku-muswe hawk… asi ndiJune here?
Hawk vs Falcon vs Chapungu
Mheremhere ‘Misoro kazhinji ipfupi uye yakatenderera, nepo makoko , Kusanganisira maacipeter, Buett uye makondo , vakanongedza misoro.
Kukura uye Chimiro
Shiri zhinji dzinodya dzinowira mumapoka mana makuru. (Northern Harrier, Osprey, uye kites zvimwe zvishoma.) Aya ndiwo maitiro epamoyo kune ese:
Buteos ndiwo mahombe, mapapiro-mapapiro, mapfupi-muswe makumbo ane mapapiro uye akashanda mapapiro.
MaAccipiters idiki, yakatetepa-ine muswe vanogara masango vane mapfupi, anokurumidza, anoputika mapundu, akapomerwa ne glide.
Mafalconi akatetepa- uye anonongedza-ane mapapiro anomhanyisa ane mapapiro ane simba.
Huru Dema Shiri (makondo nemagora) ndiwo akakurisa-saizi, akasviba-akaputirwa titans ayo anoshandisa kupembedza mapapiro awo.
Paunenge iwe warongedza mapoka ako, inguva yekudzikisira pasi mhando yemusarudzo. Tarisa zvimwe zvakasarudzika-kunyangwe musiyano wakanaka mumapapiro ungangove uchinetsa kudzika pasi. Semuenzaniso, siginecha yakapetwa kaviri 'stache pachiso cheAmerican Kestrel inogona kunge isiri pachena, saka vimba neyakajeka rose kubatsira kubatsira kusiyanisa nemukadzi mukuru uye akasviba Merlin.
Nzira yekubhururuka inogona zvakare kuve chinhu chinotsanangudza. Kubhururuka kweAmerican Kestrel kune batty uye yakati sandara, semuenzaniso, nepo Merlin mapapiro ekurova achikurumidza, ane simba, uye akafanana nepiston. Kestrels dzinoyangarara kana dzatsvedza; Merlins inorema inonyura. Peregrine Falcons, kune rimwe divi, ine isina kudzika, yakapfava mapapiro kurova-iwe unokwanisa kuona kufamba kuchikwenya pasi pemapapiro akareba uye mapapiro.
Sezvo shiri inoswedera, ita shuwa kuyedza yako hypothesis; zvimwe zvinongedzo zvinobva zvanyatsojeka sezvo daro rinovhara. Uye usazvidya moyo, kunyange nyanzvi dzinonyengerwa. Ndozvinoita kuti vadzoke, mwaka nemwaka.
Tsvuku tsvuku makondo akakura kupfuura magunguo. Ivo vachena pazvipfuva zvavo uye vane mavara bhurawuni pamisoro yavo, zviso, mapapiro uye misana. Pahuro pavo pakachena asi kumeso kwavo bhurawuni nzira yose kumapfudzi avo. Vakadaro bhurawuni hash mark stripes pamatumbu avo (pasi, pakati pemakumbo avo). Chete vanhu vakuru-vane muswe mutsvuku vane ngura dzvuku dzakatsvuka. Majuru ane miswe tsvuku ine mitsetse yakatwasuka.
Mahara peregrines madiki pane matsvuku-muswe makondo, anenge saizi regungu asi ane bulkier. Vakuru peregrines vari marasha akachena uye chena. Misana yavo, mapapiro nemisoro marasha gireyi , zvipfuva zvavo zvakachena uye matumbu avo nemakumbo zvakakanyiwa mitsara (yakatwasuka) nerima gireyi . Misoro yavo yakasviba gireyi uye zviso zvavo zvakachena nerima gireyi sideburns inonzi malar stripes. Maperegini ane marara maronda; matsvuku-muswe makondo haadaro.
Kana ichibhururuka, ine minwe pamazano emapapiro ayo here?
Wakazviona zvichibhururuka? Hawks (uye makondo nemagora) vane minwe pamazano emapapiro avo. Makonye ane mapapiro anopinza.
Silhouette yeButeo (hawk), Accipiter (hawk) uye Falcon (kubva kuNPS.gov. Ndawedzera zvinyorwa)
Sei ndisina kutora wachi yangu yeapuro kubatidza
Chii ichi chinhu pamusoro paJune?
Muna Chikumi muPittsburgh vechidiki peregrines vanosiya dendere vodzidza kubhururuka. Asina kuchena peregrines ane shava uye kirimu-mavara pane grey uye chena sevakuru. Ivo havana chena pazvipfuva zvavo uye mitsetse pazamu yavo yakatwasuka pane yakatwasuka.
Dzichangoburwa dzevechidiki peregrines dzinogona kuita chero chinhu, kusanganisira chipenga munzvimbo yemunhu. Nekuti ivo vane brown haugone kushandisa iwo ari nyore mavara cues iwe aunoshandisa kune vanhu vakuru.
Heano mufananidzo wekufananidzwa weusina mutsvuku-muswe hawk (kuruboshwe) maringe neisina kukura peregrine (kurudyi). Kunyangwe yakafanana neruvara, ivo vachiri kutaridzika zvakanyanya zvakasiyana. Dumbu reva peregrine diki rakazara mitsara.
Ndeupi mukana wekuona chero shiri? Maperegini haashoma. Tsvuku-muswe makondo ndiwo akajairika hawk muNorth America.
Saka unowanzo kuva wakarurama kana iwe ukati itsvuku-muswe. Iwe haugone kuona peregrine padyo nepasi pevhu muPittsburgh. Ndosaka tichinakidzwa nemaperegrines.
Falcons Chokwadi uye Ruzivo
Mheremhe ndeyemhuri yeiyo genus Falco. Makonye anozivikanwa nekumhanya kwavo kana vakura zvakakwana. Vanoshandisa muromo wavo kurwisa mhuka yavo.
Mheremhere shiri ine vanhu vakawanda uye inogona kuwanikwa pasirese pasara Antarctica.
Falcons anokwanisa kuchinjika mune chero mamiriro uye nekudaro tinogona kuvawana vachigara mune angangoita ese marudzi enzvimbo. Kunyangwe iri gwenga, arctic kana huswa vanogona kuwanikwa zviri nyore mune ese marudzi enharaunda.
Kune akakomberedza makumi mana emhando dzemakonzo anogara pasirese.
Hupenyu hwakajairika hwemakonzo hunosiyana kubva pamakore gumi nemaviri kusvika makumi maviri nepo mune dzimwe nguva maphonje anokwanisawo kurarama kweanosvika makore makumi maviri nemashanu.
Rudzi rwakakura kwazvo rwegwinyu ndiGryfalcon hurefu hwayo hwakatenderedza 20-25 inches (50-63 cm) uye huremu hwakatenderedza 2 kusvika 4-1 / 2 mapaundi (0.9-2 kg).
Mheremhere dzinodya zvakasikwa uye chikafu chadzo chinoenderana nemakonzo, hove netumbuyu tudiki.
Vane mapapiro marefu uye muswe wepakati nepakati uye ivo vane hutema hwakasvibira muvara asi mashoma marudzi ari akachena zvakare.
Ivo vanozivikanwa kuvhima panguva yemasikati uye nekudaro vanozivikanwa seshiri dzinodzoka.
Mafalcari anozivikanwa-kwazvo nekuda kwemaziso avo uye anogona kuona kusvika kanokwana kasere kujekesa kupfuura ziso revanhu.
Mvemve shiri dzinomhanya kwazvo. Iyo peregrine falcon inogona kubhururuka neyakajairika kumhanya kwe200 mph (320 km / h) ichikwira. Mune zvimwe zviitiko, zvakawanikwa kuti mafukoni anokwanisawo kusvika kumhanya kunosvika 242 mph (389 km / h).
Mhezi dzechikadzi dzinowanzo kuve dzakakura kudarika dzechirume uye vese vakaroorana vanozivikanwa kuchengetedza vana vavo.
Hawk Chokwadi uye Ruzivo
Kupesana neveFalcons, maHawks ndeemamwe majini. Iwo maAccipiter makoko anowanikwa kazhinji pasi pano nekudaro ndiyo mhando hombe yemakondo. Hawks idzo dzakangwara shiri dzinobata kupfuura falcons uye ivo vanongoerekana varwisa avo vavanobata. Ivo vanozivikanwa nemiswe mirefu.
Zvakafanana nemafalcon anowanikwawo nevanhu vakawanda uye anogona kuwanikwa pasi rese kunze kweAntarctica.
Hawks Unogona zvakare kugadzirisa mune chero mhando yenzvimbo dzekugara nekudaro iwe uchavawana mune ese mhando mamiriro ezvakatipoteredza. Kunyangwe iri arctic, gwenga, huswa unogona kuzviwana kwese kwese.
Hawks ane marudzi anodarika mazana maviri nemakumi manomwe panyika.
Kungofanana neFalcon hukuru hwavo zvakare hwakasiyana kubva pamarudzi kusvika kumarudzi. Zvinogona kureba semasendimita makumi maviri nemaviri uye zvinogona kurema kusvika pamashanu mapaundi.
Zvakafanana neveFalcons, vanhukadzi vanowanzo kuve vakuru kupfuura varume.
Dzinopinza bhiri chombo chadzo apo ichiuraya mhuka dzadzo. Vanoshandisa zvakare zvakafanana kubvarura mhuka yavo.
Hawks dzinozivikanwa zvakare nekuona kwavo kukuru uye dzinogona kunyatso tsvaga dzavanotora kubva chinhambwe kusvika pamamita zana.
Hawks vane hunhu hwakakosha hwavanogona kusiyanisa pakati pemarudzi akasiyana ayo dzimwe mhuka dzakawanda dzisingakwanise.
Zvakafanana neveFalcons ivo vanovhimawo masikati uye nekudaro vanozivikanwa semhuka inotsvaira.
Hawks haina kujeka nezvechikafu chavo uye vanogona kudya chero chinhu chinouya nenzira yavo. Vanogona kudya makonzo, matatya, nyoka, zvimwe zvinokambaira nedzimwe shiri zvakare.
Hembe yemurume inogona kuita maekisesaizi kwemaminitsi anosvika gumi uye inozivikanwa zvakanyanya nekutamba kwavo mumhepo.
Ivo vanosangana nemumwe chete kunze kwekunge uye kusvikira mumwe wavo afa nekudaro anowira pasi peboka remhuka dzemurume mumwechete.
Ivo vanowanzove nehupenyu hwehupenyu hunosiyana kubva pamakore gumi nematatu kusvika makumi maviri nepo pane zvimwe zviitiko umo makoko akararama kwemakore makumi maviri nemashanu.